Na dia nanjary zava-dehibe indrindra aza izany tamin'ny taon-dasa, satria ny areti-mandringana dia nahatonga ny fivezivezena mafy, dia hitohy ny fironana. Araka ny fikarohana natao vao haingana, nanao tao amin'ny tatitra The Top Instagram Virtual Influencers izahay tamin'ny taona 2020, fa misy vokany amin'ny mpihaino azy ireo robot-influencer ary manidy ny elanelana misy eo amin'ny marika sy ny mpihaino azy. Tao amin'ny fanadihadianay dia hitantsika fa ny influencer virtoaly dia efa in-telo heny tamin'ny fandraisana andraikitry ny tena fitaoman'olombelona. Farany, ny influencer virtoaly dia azo antoka kokoa amin'ny resaka lazan'ny marika, satria ireo robot ireo dia afaka fehezina, soratana ary arahi-maso ny mpamorona azy ireo. Ireo influencer virtoaly dia manome fotoana kely kokoa handefasana hafatra amin'ny haino aman-jery sosialy manafintohina, tsy mahomby na mampiady hevitra izay mety hametraka marika amin'ny fomba fanaraha-maso simba.
17 Jun 2021 amin'ny 4:37 AM
Fironana lehibe amin'ny marketing influencer. Misaotra nanoratra ity lahatsoratra mahatalanjona ity.